भिरिंगी के हो - एक परिचय, डा. कमलराज धिताल • Health News Nepal
डा.कमल राज धिताल, छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ
ट्रेपोनेमा पालिडम नामक किटाणुका कारण लाग्ने यौन रोग भिरिंगी हो । यसलाई अंग्रेजीमा सिफिलिस (Syphilis) भनिन्छ ।
के कारणले भिरिंगी रोग लाग्ने गर्छ ? यो सरुवा रोग हो ?
यौन सम्पर्कमा सक्रियलाई यो रोग लाग्ने गर्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारणले यो रोग लाग्ने गर्छ । यो एकबाट अर्कामा सर्छ । गर्भवती महिलालाई भिरिंगी भएको छ भने पेटमा भएको बच्चालाई पनि सर्न सक्छ । यसैगरी ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट पनि यो सर्न सक्छ । साथै भिरिंगीको घाउ छोएमा पनि सर्न सक्छ ।
Syphilis introduction illustration: jarun011/iStock/Getty Images Plus Syphilis stock photo ORG XMIT: POS1905031328470811
भिरिंगीका लक्षण के-कस्ता हुन्छन् ?
भिरिंगीलाई सामान्यतयाः तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । लक्षण पनि सोही अनुसारको देखिन्छ । पहिलो अवस्थाको भिरिंगीमा यौनांग नदुख्ने नचिलाउने सर्टको बटन जस्तो कडा खालको घाऊ आउँछ । यो सामान्यतया एउटा मात्र आउँछ ।
यस्तो घाउ असुरक्षित सम्पर्कको ९ देखि ९० दिनसम्म आउन सक्छ । घाउ उपचार नगरेपनि ३ देखि ६ हप्तामा आफैं निको हुन्छ । यस्तो घाउ आएको करिब ३ हप्तापछि रगत जाँच गर्दा किटाणु देखिन्छ । दोस्रो अवस्थाको भिरिंगीमा पहिलो अवस्थाको घाउ देखेको करिब ६ हप्तापछि आउँछ । यो अवस्थामा हातखुट्टा, जिउमा नदुख्ने नचिलाउने खटिराहरु देखिन्छन् ।
त्यसैगरी ज्वरो आउने घाँटी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने जस्ता समस्याहरु पनि देखिन्छन् । तेस्रो अवस्थामा भने यो रोगले आँखा, नशा, मुटु तथा जोर्नीमा असर गर्छ । कुनै मानिसलाई पहिलो अवस्थाको रोग नदेखिकन दोस्रो वा तेस्रो अवस्थाको रोग देखिन पनि सक्छ ।
भिरिंगीको उपचार संभव छ ? महिला या पुरुष कसमा बढी देखिन्छ ?
पहिलो तथा दोस्रो अवस्था भिरिंगी भने सहजै उपचार गर्न सकिन्छ । सामान्य औषधिको प्रयोगले यो निको हुन्छ । तेस्रो अवस्थाको उपचार भने केही जटिल छ । अरु विधाका चिकित्सक मिलेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारमा आएका बिरामीमध्ये महिलाभन्दा पुरुषमा बढी यो देखिएको छ । २० देखि ३५ वर्षका पुरुषमा बढी भिरिंगी भएको पाइन्छ ।
वैदशिक रोजगारीमा जान समस्या हुन्छ ?
भिरिंगी उपचारको प्रक्रियामा दुइओटा रगत जाँचको विशेष महत्व हुन्छ । एउटा ‘टिपिएच ए’ र ‘भिडीआरएल’ । उपचार गरेपछि ‘भिडी आर एल’को मात्रा बिस्तारै घट्दै जान्छ भने ‘टिपिएचए’ भन्ने परीक्षण एकपटक पोजटिभ भएपछि फेरि नेगेटिभ हुँदैन । त्यसैले उपचारपछि रोग निको भएपनि ‘टिपिएचए’ भन्ने टेस्ट नेगेटिभ नहुने हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि समस्या हुनसक्छ ।
Dr KamalRaj Dhital
✍️ डा. कमलराज धिताल
छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. कमलराज धिताल ग्रीन सिटी अस्पताल ,ह्याम्स अस्पताल र बिपि स्मृति अस्पतालमा कार्यरत छ्न।